Ndi ọchị ehi atọrọla nwa CMD nke ụlọọgwụ Lafia na ndi ọzọ | odumblog
Ndi ọchị ehi atọrọla nwa CMD nke ụlọọgwụ Lafia na ndi ọzọ
posted on Jul. 28, 2019 at 11:56 am
Ndi na-achị ehi n’ụbọchị Tuzde, zoro onwe ha n’Ajebo n’ụzọ awarawa Lagos-Ibadan wee tọrọ mmadu atọ. Chief Medical Director nke ụlọ ọgwụ Lafia bụ Dkt. Oladipupo Sule gwara ndi Punch Metro na Wenesde na-atọrọ nwa nwoke ya bụ Kayode na ndi ọrụ ya abụọ. Ndi ọrụ ya atọrọ bụ Opeyemi Abifarin na Dele Adigun.
Onye nya ụgbọala nke bu ndi atọrọ, Felix Tomori kwuru na mgbe ha na-erute Ibadan toll gate, na mgbo egbe bidoro dawa aghara aghara. Ka ha na-aga n’ihu, ndi ọchị ehi gbara egbe n’ihu ụgbọala nke gbatara Kayode n’ụkwụ. O kwuru na ụgbọala ndi so ha n’azụ bidoro laghachiwa azọ ebe ụfọdụ hapụrụ ụgbọala ha gbalaga.
Tomori kwuru na ndi mmadu abụọ ndi ọ ji egbe aga ndi a nwụchiri ka o si n’ụgbọala rituo, ma ọ kwara ha aka gbafuo. O kwuru na ndi ahụ yiri ndi Fulani. Ha bidoro chụwa ya ọsọ, ma kwụsị mgbe ha chọpụtara na ndi ọzọ na-achọ ịgbalaga. O kwuru na naani otu onye ọrụ ha a na-akpọ Chika gbalagara.
Ka ọ dị ugbu a, ndi oji egbe aga ndi akpọbeghi ezinaụlọ ndi a atọrọ. Mana ndi uwe ojii na-anwa ike ha ịhụ na-achọtara ndi a ma jide ndi oji egbe aga ndi a.
Mmachị mbata obodo US nyere ndi ọchịchị Naijiria gosiri na mpụtara ntuli 2019 bụ ụgha: Atiku
Ezubeghi RUGA maka steeti ndị abụghị nke ndị Fulani- Ganduje
Odum Blog6 days ago